Nilaza ny mpikaroka ary ny injeniera fa manohitra ny tetikasan'ny Teleferic ao Sapanca isika RayHaber
HomeTORKIAFaritra Marmara54 SakaryaNilaza ny mpikaroka ary ny injeniera fa manohitra ny tetikasan'ny Teleferic Sapanca izahay
Nilaza ny mpikaroka ary ny injeniera fa manohitra ny tetikasan'ny Teleferic Sapanca izahay
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 54 Sakarya, ANKAPOBENY, Headline, Faritra Marmara, TORKIA, TELPHER 0
Nihaona tamin'ny solontenan'ilay orinasa nanatanteraka ny tetik'asa ropeway tao Sapanca ny solontenan'ny efitrano fiasan'ny injeniera sy mpikaroka ao Sakarya.
Ny tetik'asa ropeway ao amin'ny Fivondronan'i Kırkpınar, izay natsangana tao amin'ny Kaominina Sapanca nandritra ny vanim-potoan'ny fitantanana teo aloha, dia efa natao tao anatin'ny fandaharam-bahoaka nandritra ny fotoana ela. Bursa Teleferik AŞ, izay nahazo ny maintso, dia nihaona tamin'ny fihetsik'ireo mponina ao amin'ny faritra sy ireo fikambanana tsy miankina alohan'ny nanombohan'ny asa.
Salim Aydın, solontenan'i Sakarya Providence of Chamber of Engineers Mekanika izay nifandray tamin'ny TMMOB (Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects), Hüsnü Gürpınar, Filohan'ny Sampana Sekretera Sakarya, injeniera Sami Kafadar, solontenan'ny sampana ao Sakarya amin'ny Chamber of Architects, ho an'ny mpikambanan'i Turgay Demirgövde. ny Mandacı; Nihaona tamin'i Burhan Özgümüş avy ao Bursa Teleferik A.Ş.
Taorian'ny fangatahan'ny orinasa, Burhan Özgümüş, tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa dia niresaka voalohany tamin'ny fivoriana natao tamin'ny solontenan'ny faritany ao amin'ny Chamber of Engine Mechanical.
Explainedzgümüş nanazava ny antsipirihany momba ny fizotran'ny fangatahana, ary nambarany fa ny 80% ny fandoavam-bola natao tao amin'ny Kaominina Sapanca dia natao.
Raha tsy mijery ilay toerana
Özgümüş dia nanambara fa nanao sonia ny tatitry ny fandefasana izy ireo nefa tsy nahita ilay toerana, nefa tsy afaka nanomboka ny asa izy ireo; ny antony nahatonga izany dia ny anisany Ben'ny tanàna vaovao dia andrasana haka ny toeran'ny kaominaly, hoy izy.
ASKEDY NY TENDER
Ny solontenan'ny Chamber of Engineers Mekanista amin'ny faritany Salim, Kartepe sy Sapanca Kırkpınar auctions nanontany ny isan'ireo orinasa mandray anjara amin'ilay raharaha.
Mpiasa orinasa, ity fanontaniana ity; mandritra izany fotoana izany, ny 2 dia fe-potoana isam-bolana ary ny rakitra matevina, ny isan'ny orinasa 4, ny isan'ny orinasa niditra tao amin'ny 1 malemy, izy ireo no namaly azy ireo tamin'ny filazany.
MISAOTRA METY AN'IZANY IZAO IZAO ITY
Solontenan'ny Chamber of Engineers Engineer solombavambahoaka amin'ny fivoriana, nomena izao fampahalalana manaraka momba ny tohin'ny fivoriana izao:
Teknik Nambara ara-teknika fa ratsy ny safidy ny toerana hanaovana an'ity tetikasa ity. Raha angatahina, ambara fa hanome fanampiana feno ho an'ny fandalinana vaovao izy ireo amin'ny famaritana toerana hafa izay mahasoa ny vahoaka sy ny tanàna nefa tsy manimba ny fifandanjan'ny tontolo. Union of Chambers of Turkish Architects sy Engineers As Sakarya singa dia manohitra ny fanjarian'ny tetikasa izy ireo. Nampandrenesina ny mpiambina ny fahavononany ary nisaotra azy ireo tamin'ity fihaonana ity. ”(Sakarya Yenihaber)
Niresaka momba ny metro Kadıköy-Kartal ny Architects and Engineers Group! 19 / 08 / 2012 Na dia nanamboatra ny metro faharoa antitra indrindra manerana izao tontolo izao aza izahay, Rail Systems dia efa nadinadinina tao amin'ny firenentsika nandritra ny fotoana maharitra hatramin'ny 1940 ka hatramin'ny 1990 taona. Ny fahaterena ny rafi-dalamby ampy any Istanbul sy ny tanàn-dehibe manerantany ary ny fampihenana ny fampidirana ny fitateram-bahoaka dia nahatsapa hatrany hatrany tany Istanbul, tanàna iray metropolita. Ny fampandrosoana ny rafitra fitaterana dia heverina ho manan-danja, saingy rehefa mieritreritra momba ny fahaiza-mitombo isika, dia hita fa tsy ampy ny fampianarana. Ny rafitra fitaterana sy metro dia toeram-piasana ara-toekarena, azo antoka, haingana ary mora.
Androany teo amin'ny tantara: nanomboka ny 11 Febroary 1888 Nanangana ny seranam-piaramanidina Sirkeci. Architect Prussian Ogust Yasmund ... 11 / 02 / 2015 Androany tao amin'ny tantara 11 Miaraka amin'ny sitrapon'i 1878 tamin'ny volana febroary, dia nekena ny fananganana ny lalamby lalamby Rumeli izay nandefasana orinasa ho an'ny zom-pirenena Okrainiana. Ny anaran'ilay orinasa dia ny Company Rail Company. 11 Febroary 1888 Nanomboka ny fananganana ny station Sirkeci. Ny tranobe, noforonin'ny architect Prussian Ogust Yasmund, dia nirahina tamin'ny 3 November 1890.
Nanamboatra simenitra miorina tamin'ny taona mosque Sinan ny 500 ny maritrano Marmaray 110 tamin'ny taona 06 / 06 / 2013 Ny Prime Minister, Tayyip Erdoğan, dia nanontany an'i Ahmet Eren, filohan'ny Fikambanan'ny mpampiasa mpampiofana mpitrandraka ny simenitra ary ny filankevi-pitantanana Eren of Directors nandritra ny fivoriana tao Bitlis, 500 taona lasa izay. firy taona? - 110 dia manana tantara iray isan-taona. - Na dia tamin'izany fotoana izany aza dia napetraka ny rafitra 2 taona. Nahoana ianao no tsy afaka mandao an'ireto 500-500 taona ireto? Ahmet Eren, ity fifanakalozan-kevitra eo amin'ny Praiminisitra hoy Torkia simenitra Manufacturers Association (TCMA) ny Filoha Automotive sy Oyak Vondrona simenitra ao amin'ny fivoriana, ny filoha lefitra TÇMB ...
Sary hosodoko hafahafa ao amin'ny Tendrombohitra Mimar Sinan 30 / 04 / 2014 Sary hosodoko ho an'ny Mimar Sinan Bridge: Iray amin'ireo tetezana goavambe izay naorin'ny Kocaeli Metropolitan Munisipaly eo amin'ny D-100 Highway, ny tetezana Mimar Sinan eo alohan'i Yeni Cuma Mosque no nandoko. Ny dingana fandokoana dia andrasana hamarana ao anatin'ny volana 6. CLEANLENİP, MPANOMPOA Ny iray amin'ireo tetezana goavambe namboarin'ny Kaominin'i Metropolitan eo amin'ny D-100 Highway, iray amin'ny tranon'ny zezika Sinan Bridge mitan'i Sinan Bridge 3 sary hosodoko natao tokony ho iray volana lasa izay. Ny orinasa dia nanomboka ny fanaovana pirinty tetezana tamin'ny fiandohan'ny volana fahavaratra. Ny hosodoko miaraka amin'ny vano manokana sy mpiasan'ny 4 dia tanjona ho vita amin'ny volana 7. Nilaza ny tompon'andraikitry ny orinasa fa raha nandeha tsara ny toetr'andro, dia ho daha izany vanim-potoana izany
Raha mandeha ny fanentanana ny Tafika Mimar Sinan 03 / 06 / 2014 Raha afaka mandeha ihany koa ny fiaramanidina amin'ny Tetezan'i Mimar Sinan: D-100 highway Maro be ny fifamoivoizana eo amin'ny tetezan'ny mpandeha an-tongotra amin'ny fiampitana an'i Izmit. Na izany aza, ny mpitaingina ny Tetezan'i Mimar Sinan, indrindra eo anoloan'ny Moskeo Yenicuma, dia matetika no kilemaina. Rehefa tsy mandeha ireo tohatra ireo, indrindra ho an'ny zokiolona, ​​ny fiampitàna ny tetezana an-tongotra dia tena mampihetsi-po tokoa. Ny mpihazakazaka dia mila asiana matetika kokoa raha miasa, ary raha toa ka tsy mahomby izy ireo dia mila miditra haingana kokoa.
Ny fanadiovana graffiti amin'ny marmaray Sets
Niresaka momba ny metro Kadıköy-Kartal ny Architects and Engineers Group!
Androany teo amin'ny tantara: nanomboka ny 11 Febroary 1888 Nanangana ny seranam-piaramanidina Sirkeci. Architect Prussian Ogust Yasmund ...
Nanamboatra simenitra miorina tamin'ny taona mosque Sinan ny 500 ny maritrano Marmaray 110 tamin'ny taona
Raha mandeha ny fanentanana ny Tafika Mimar Sinan
Ny ascense dia miasa ao amin'ny Mimar Sinan Yaya Bridge
Fandravana mitsangana avy amin'ny sehatry ny injeniera Bursa sampana ho an'ny drafitry ny fitaterana sy T-1
Ireo Injeniera Gebzeli dia nitety an'i Izmit Bay Crossing Bridge
Ny injeniera Tiorka dia mamorona traktera eo an-toerana sy eo an-toerana